Magaca Anandamide (AEA) waxay ka timaadaa erayga Ananda oo macnaheedu yahay inay keento farxad. Waa maadada loo yaqaan 'endocannabinoid' oo lagu kala saaray kooxda amid acid amides group. Qaab ahaan, waxay leedahay isku dhafnaan moodeel ah oo ah tan tetrahydrocannabinol (THC), xarunta firfircoon ee xashiishadda. Caadi ahaan, waxaa si dabiici ah u soo saara jirka marka loo baahdo maskaxda iyadoo loo marayo falcelinta uumiga neerfayaasha.
Sidee Anandamide (AEA) u Shaqaysaa?
Anandamide waxaa laga sameeyay N-arachidonoyl phosphatidylethanolamine. Waxaa jajabiyay enzyme fatty acid amide hydrolase (FAAH) enzyme si loo soo saaro arachidonic acid iyo ethanolamine. Ahaanshaha meydka jilicsan, waxaa si deg deg ah ugu kala jaba xeryaha kale. Haddii FAAH uusan sidan dhaqso u sameynin, Anandamide-ka ayaa jirka ku laalaada muddo dheer. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad u badan tahay inaad kasban doontid waxtar badan, tusaale ahaan, walaac yar.
Anandamide waxay la falgashaa labadaba CB1 iyo CB2 qaatayaasha laga helo nidaamka neerfaha iyo wareega wareega, siday u kala horreeyaan. Is dhexgalka ay la leeyihiin receptor cannabinoid maskaxda ku dhaca, waxay ku dhacdaa mid ka mid ah nidaamka dareemayaasha. Kororka heerarka Anandamide wuxuu horseedaa heerar farxad leh.
Maxaa Anandamide (AEA) loo isticmaalaa (Faa'iidooyinka)?
Quruxda Dheeraynta Anandamide waa inay gacan ka geysato kordhinta awooddaada xusuusta shaqada. Waxay kaloo kaa caawineysaa inaad noqotid hal abuurnimo adoo uruurinaya macluumaad fara badan oo aad u adeegsan karto inaad ku abuurto figrado cusub.
Daraasad lagu sameeyay jiirarka iyadoo ay yaraatay xusuusta oo shaqeyneysa ayaa muujisay in isticmaalka Anandamide, ay jirto horumar muuqda. Marka xigta ee aad rabto inaad diirada saarto waxbarashadaada ama shaqadaada, markaa waad isticmaali kartaa kaniiniga Anandamide.
Waxay xukumaan cuntada
Haddii aad xiisaynayso joogtaynta cunno la xakameeyay, markaa waa inaad rabtaa inaad rabtid cuntadaada. Mid ka mid ah dheefaha Anandamide waa in ay nidaamiso rabitaankaaga cuntada iyo wareegga xiisaha leh. Sidaas awgeed, tani waxay yareysaa murugada iyo damaca waalan. Tan, waxaad xitaa go'aansan kartaa inaad haysato hal qeyb maalintii haddii aad ku jirtid howgal lumiyaan miisaan. Tijaabi maanta oo arag sida ay u beddeleyso ciyaarta luminta miisaanka adiga.
Si maskaxdaadu uga shaqeyso sida ugu badan ee awoodeeda, markaa waa inuu jiraa neurogenesis. Taasi waa habka loo abuuro neurons cusub ama unugyada maskaxda. Mid ka mid ah kiimikooyinka si wax ku ool ah u kordhiya neurogenesis, gaar ahaan waayeelka, waa Anandamide (AEA).
Haddii aad ku sii wadato heerarka Anandamide-ka maskaxda ku habboon, markaa waxaad halis yar ugu jirtaa inaad la kulanto arrimaha neerfaha.
Wuxuu nidaamiyaa damaca galmada
Maalmahan, dadku waxay u isticmaalayaan Anandamide si ay u horumariyaan rabitaankooda galmada. Qiyaasta hoose ee daawada Anandamide, waxaa jira kicinta rabitaanka galmada. Taasi, si kastaba ha noqotee, waxay u shaqeyneysaa dhanka kale markii mid sare qaato Qiyaasta daawada Anandamide. Rabitaankooda galmada ayaa yaraanaya.
Fikrad kale oo taageeraysa doorka Anandamide ee galmada waa xaqiiqda inay hagaajiso niyaddaada. Waxay kaloo kaa caawineysaa yareynta walaaca, taas oo iyadu kadhigeysa damaca galmadu inuu kaco.
Anandamide wuxuu cadeeyay inuu soo bandhigo ficil xasaasiyadeed oo loo adeegsado waxyeelada nafsiga ah. Waxay xakameysaa koritaanka unugyada kansarka, gaar ahaan kuwa qaba kansarka naasaha. Faa'iidada ayaa ah in aysan u horseedin saameyn xun sida dawooyinka caadiga ah.
Anandamide waxay xakameyn kartaa lallabbo iyo matag. Waxay ku shaqeysaa gacanta serotonin si loo soo saaro saameynkan. Kuwaani waxay ka dhigaan kuwo waxtar u leh dawooyinka lidka-dawooyinka ee bukaanka kansarka inta lagu jiro kemotherapy.
Anandamide waxay kuxiran tahay CB1 waxayna baabi'isaa xanuun kasta iyadoo caqabad ku ah calaamadaha. Iyada oo ay ugu wacan tahay saamaynta xanuun-yareeynta, kiniiniyada Anandamide waxaa loo isticmaali karaa maareynta xannuunka bukaanka qaba xanuunka daba-dheeraada.
Wuxuu xukumaa niyadda
Nidaamka loo yaqaan 'endocannabinoid' waa waxa xakameeya niyaddaada. Anandamide waxay habeysaa dareenka cabsida, welwelka, iyo farxadda. Qaddarka sare ee Anandamide ee nidaamkaaga, ayaa niyadda ka fiican.
Ka hortagga murugada
Haddii aad niyadjab dareemeyso, ka dib waxaad u baahan kartaa inaad quudiso heerarkaaga anandamide. Daraasad lagu sameeyay jiirka streptozotocin-sonkorowga sonkorowga ah ayaa muujisay in Anandamide ay dib uga laabato dabeecadda niyad-jabka leh.
Waxay ka hortageysaa barar iyo barar
Mid kale oo muhiim ah Anandamide anfaca waa in ay ka hortagto bararka unugyada iyo sidoo kale bararka. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu beddelo ciladaha bararka iyo xanuunnada maskaxda ku dhaca.
Waxay kobcisaa bacrinta
Soo-dhoweynta Anandamide iyo CB1 waxay door muhiim ah ka ciyaaraan ugxadda iyo sidoo kale abuurista. Daraasad la sameeyay ayaa muujisay in ay jiri doonaan heerar sare oo ah 'anandamide' ama in ay halkaas ku guuleysato ugxantu. Sidoo kale, heerarka Anandamide waa inay noqdaan heerkooda ugu hooseeya ee ku talagalka inuu dhaco.
Waa maxay Cunnooyinka ay kujiraan Anandamide (AEA)?
Acids dufanka asaasiga ah
Markii aan kahadalno endocannabinoid-kordhinta acids dufanka, waxaan ka hadleynaa ukunta, iniinyada, sardines, miraha chia, miraha flax, miraha hemp iyo sidoo kale saliida hemp. Waxay jirkaaga ku quudiyaan omega-3 iyo aashitada omega-6 ee kor u qaada waxqabadka endocannabinoids.
Dhirta iyo shaaha
Dhirta sida geedo liin, hops, xashiishad, dabacasaha, qorfe, oregano iyo basbaaska madow waxay leeyihiin maadooyin ka caawiya xoojinta nidaamka endocannabinoid.
Dhamaanteen waan jecelnahay shukulaatada, sax? Hagaag, aan ka aheyn macaan iyo damacyada ay la timid, waa wax aad u fiican Isha Anandamide (AEA). Waa tan sababta; Budada cacao waxay ka kooban tahay laba xeryood oo wadaaga qaab dhismeedka kansarka loo yaqaan 'endocannabinoids'.
Waxay oleolethanolamine iyo linoleoylethanolamine. Labada ayaa xaddidaya kala-goysyada jirka ee endocannabinoids-ka sidaas darteed waxay kaa ilaalinayaan yaraanta Anandamide.
Sida loo Kordhiyo Anandamide (AEA)?
Haddii aad raadineyso hab aad ku kiciso nidaamka endocannabinoid, markaa waa inaad tixgelisaa qaadashada CBD. Soo bandhigista xaruntani waxay kordhisaa heerarka anandamide iyada oo loo marayo xakameynta FAAH. FAAH waa enzyme-ka mas'uul ka ah burburka anandamide. In ka yar FAAH-da, ayaa jirka ku sii badisa Anandamide.
Malaha waxaad maqashay wax la yiraahdo orodka sare. Dareenka wanaagsan ee aad hesho ka dib jimicsiga. Haddii aad soo martay, waa inaad mar kale jeclaan lahayd inaad mar kale lahaato. Waxaas oo dhan waxaa keena kororka heerarka anandamide-ka.
Daraasad lagu sameeyay jiirarka ayaa muujisay in jimicsi ka dib, ay umuuqdeen kuwo deggan isla markaana aaney aad ugu jilicsanayn xanuunka sidoo kale. Waxay sidoo kale lahaayeen heerar sare oo ah endocannabinoids iyo endorphins. Sidaa daraadeed waxaa la soo gabagabeeyey in dareenku uu ka dhashay dhaqdhaqaaqa dhakhaatiirta CB1 iyo ololaha Anandamide. Maxaad u jimicsan weyday oo jirkaaguna ugu mahadcelinayaa shaqada adag oo dhan?
Yaree heerarka walaacaaga
Culayska fekerka waa mid caadi ah oo mararka qaar aan laga maarmi karin Laakiin miyaad ogeyd in qabashadu ay kobcinayso heerarkaaga Anandamide (AEA)? Sababta ayaa ah in saynisyahannadu ay heleen walaac si ay u sababaan hoos u dhac ku yimaada dadka qaata CB1.
Daraasad lagu sameeyay xayawaanku waxay cadeysay in marka qofku la kulmo heerarka glucocorticoid xad dhaafka ah waqti dheer, tusaale ahaan, marka qofku uu leeyahay xaalado walaac dabadheeraad ah, hibooyinka loo yaqaan 'hippocampal CB1' ayaa yareeya. Sidaas awgeed, waxaa hoos u dhacay shaqada cannabinoid.
Markaa haddii aadan doonayn inaad ku xanuunsato yaraanta Anandamide, waa inaad isbedel ku sameysaa noloshaada haddii aad had iyo jeer ku joogto xaalado walaac badan. Waxaad sidoo kale ku tababaran kartaa nasashada sida jawaabta walaaca haddii ay dhacdo inaad naftaada ku dhacdo xaaladdan oo kale.
Daweynta waa hal dariiqo oo la hubo oo lagu soo saaro dhammaan kiimikooyinka dareemaya-wanaag-wanaag. Ku celcelinta waxay horumarin kartaa wax soo saarka dabiiciga ah ee Anandamide iyo dopamine. Waxay kaloo kordhin kartaa heerarka serotonin iyo endorphins.
Waxay kaloo kordhisaa oxytocin, oo kicisa wax soo saarka Anandamide.
Qaadashada xamuul madow
Baarayaasha ayaa shaaca ka qaaday in gawaarida madow ay kujiraan Anandamide. Waxay aaminsan yihiin in gawaarida waaweyn ay u isticmaalaan inay ku soo jiitaan xayawaanka si ay u quudiyaan jirkooda si ay u kobciyaan faafitaanka malmahooda. Taasi waxay siineysaa fursad fiican oo ay wax ku baraan.
Anandamide (AEA) Qiyaasta
Sida kuwa kale ee loo yaqaan 'endocannabinoids', qiyaasta hoose ayaa faa'iido leh, halka qaadashada sare ay waxyeello leedahay. Ku habboon Qiyaasta daawada Anandamide waa inuu noqdaa 1.0mg / kg.
Dhibaatooyinka dhinaca Anandamide (AEA)
Xaruntaan si wanaagsan ayaa loo dulqaatay, dhifna wey ku soo gartaa inaad la kulanto waxyeelada Anandamide. Waxyeelooyinka qaarkood ee ku meelgaarka ah waxay noqon karaan miisaan lumis, matag, iyo dawakh.
Anandamide (AEA) Kaabis ayaa iibsata
Sidaad u aragto, Anandamide ayaa door muhiim ah ka ciyaara jidhkeena. Marka laga reebo nidaaminta dhowr hawlood oo muhiim ah, waxay sidoo kale kaa horjoogsanaysaa cudurrada la xiriira Anandamide. Haddii aad dareento inaad haysatid yaraanta Anandamide, markaa waa inaad tixgelisaa inaad ku darsato. Si kastaba ha noqotee, cuntada iyo jimicsiga ayaa laga yaabaa inaanay ku siin Anandamide kugu filan. Xagee ka iibsataa Anandamide?
Wisdomkool waa alaab-qeybiyeyaasha Anandamide (AEA) oo kaliya kaa iibin doona alaab aad waxtar u leh.
Mallet PE, Beninger RJ (1996). "The endogenous Cannabinoid receptor agonist anandamide wuxuu wax u dhimaa xusuusta jiirka". Farmashiista Dabeecadda. 7 (3): 276–284
Cannabinoids iyo Maskaxda, oo uu tafatiray Attila Köfalvi, bogga 15-30
Rapino, C.; Battista, N .; Bari, M .; Maccarrone, M. (2014). "Endocannabinoids sida biomarkers-ka taranka aadanaha". Cusboonaysiinta Taranka Aadanaha. 20 (4): 501-516.
1.Waa maxay Anandamide (AEA)?
2.Sidee ayuu u shaqeeyaa Anandamide (AEA)?
3.Waa maxay Anandamide (AEA) Loogu Adeegsaday (Faa'iidooyinka)?
4.Waa maxay Cuntooyinka ka kooban Anandamide (AEA)?
5.Sidee Loo Kordhiyaa Anandamide (AEA)?
6.Andandamide (AEA) Qiyaasta
7.Anandamide (AEA) Waxyeellooyinka
8.Anandamide (AEA) Supplement iibsadaan